नेपालमा निजी प्रयोगशालाले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने – HostKhabar ::
नेपालमा निजी प्रयोगशालाले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा
काठमाडौं : सरकारले निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले कोभिड-१९ परीक्षण निजी प्रयोगशालाले पनि गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको हो।
सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रयोशाला निर्माण गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति लिएर निजी प्रयोगाशालाले परीक्षण गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए।
यस्तै सोमबारबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पिसिआर परीक्षण सुरु भएको छ। यो सँगै नेपालमा विभिन्न १६ स्थानमा पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर १ ले कोरोना परीक्षणका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १ सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या ५२ रहेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा ३१ जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी वीरगञ्जमा ३ तथा भरतपुर र कैलालीमा १-१ जना उपचाररत रहेका छन्।
अहिलेसम्म १६ जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले केही ठाउँमा मात्र कोरोना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताए। कोरोनालाई दोस्रो चरणमा नै सीमित राख्न लकडाउनको पूर्ण पालना र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
सोमबारसम्म ५३ हजार ५ सय ३४ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पिसिआर विधिबाट १० हजार ४ सय ७१ र आरडिटी विधिबाट ४३ हजार ८३ जनाको परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार १ सय ८४ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरडिटी परीक्षण भएको छ। त्यहाँ ११ हजार ९ सय ६१ वटा परीक्षण भएका छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा ४ हजार ५ सय ४५, प्रदेश नम्बर २ मा ५ हजार २ सय ८ र बागमती प्रदेशमा ७ हजार ६ सय २६ वटा परीक्षण भएका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ९ सय २४, प्रदेश नम्बर ५ मा ३ हजार ४ सय ७१ र कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार १ सय २८ आरडिटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए।
अहिले २० हजार १ सय ९५ जना देशभरी क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा ८ र बाहिर ९८ सहित १ सय ६ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्।